Kabsado Khasaaray Or Data tirtiraa SSD An | Data Recovery for SSD
Sidee Ladnaansho Khasaaray Or Data tirtiraa SSD An
Home → Sidee Ladnaansho Khasaaray Or Data tirtiraa SSD An
Kabsaday xogta lumo ama la tirtiray ka SSD ah (Solid State Drive) Khasab ma aha in lagu adag.
Si aad u hubiso, la RescuePRO® Deluxe for SSD, geedi socodka dib u soo kabashada waa mid fudud sida saddex tallaabo fudud.
*Fadlan ogow, RescuePRO® Deluxe for SSD waxaa loogu talagalay soo kabsaday xogta laga external drives SSD, waxa aan la loogu talagalay inuu ka soo kabsado drives nidaamka.
RescuePRO® Deluxe for SSD laga heli karaa labada a Windows® iyo a Mac version.
Hel version Windows halkan……
Hel version Mac halkan….
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka SSD?
Hubiyaan in aad drive SSD dibadda ku xiran yahay in aad computer.
1. Start RescuePRO® iyo dooran nooca dariiqada soo kabashada aad rabto inaad qabato – Kabsado by File Content (nooca) ama Kabsado by Filesystem (Undelete).
Kabsado by File Content iskaan doonaa qalab aad dhan iyo soo kabsadaan xogta nooca file aqoonsiga content xitaa haddii filesystem ku maqan yahay.
Kabsado by Filesystem waa shaqo undelete ah oo u baahan filesystem oo sax ah.
Ma hubo nooca kabashada laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u soo kabashada?
Ha ka waaban inaad nala soo xiriir si taageero farsamo oo lacag la'aan ah.
Shaqaalahayaga saaxiibtinimo aad mari karin doorashada soo kabashada ku habboon xaaladdaada.
Haddii aad doorato inuu ka soo kabsado by file Content, shaashadda soo socda u ogolaan doonaa in aad ka dooro mid Photos, Audio / Video, ama kale Files.
2. Choose your removable media from the list (isticmaalaan fursadaha caadiga ah markii ugu horeysay RescuePRO waxaa maamula oo isticmaal warqad drive ka dhigan warbaahinta ama si toos ah qalabka hab jirka aad haddii warqad drive lahayn ayaa loo xilsaaray in aad warbaahinta).
Dooro BILOWGA si ay u bilaabaan nidaamka iskaanka.
3. Once the scan completes you will receive a list of recovered files. files waxaa badbaadiyey in drive adag si toos ah.
Guji Folder Output si aad u eegto faylasha:
In ay! files Your hadda noqon doonaa arki in folder wax soo saarka.
Si loo ilaalin lahaa drive la files tirtiray, dhammaan faylasha soo kabsaday waa in la badbaadiyey in qalab kaydinta kale ama warqad drive kale ee nidaamka. Ha download software si drive in aad rabto inuu ka soo kabsado.
Fadlan xusuusnow, haddii aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado files ka drive adag, fadlan isticmaal FILERECOVERY® rayshada drive adag.
Haddii aadan awoodin inuu ka soo kabsado oo arag xogta la versions maxkamadda, waxaa uu noqon karaa xaalado kale oo aan kaa caawin kara. Waxaan leenahay farsamo soo maray kuwaas oo samayn kartaa dib u soo kabashada jirka ah mid ka mid ah xarumaha soo kabashada xogta. Si aad ula xiriirto xarumaha kabashada xogta, kaliya halkaan riix >>> Xogta Xarumaha Recovery<<<< Iyada oo waxyaabaha soo kabashada our, waxaan ku siin taageero farsamo oo aan xad lahayn oo lacag la'aan ah. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo farsamo ku saabsan versions kala duwan la heli karo ama version idiin khayr, fadlan nala soo xidhiidh